Linux-yakasununguka 5.14 inouya neyakagadziridzwa kuchenesa zvinyorwa | Linux Vakapindwa muropa
Linux-yakasununguka 5.14 inosvika iine zvinyorwa zvekuchenesa zvinyorwa
Mazuva mashoma apfuura iyo Latin American Mahara Software Foundation yakaburitswa (nekunonoka kudiki) iyo nyowani yemahara vhezheni yeLinux kernel 5.14, «Linux-yakasununguka 5.14 ″ inova kernel yakabviswa zvinhu zvefirmware uye madhiraivha ane izvo zvisina-zvemahara zvinhu kana kodhi zvidimbu zvine chiyero chinogumirwa nemugadziri.
Linux-yakasununguka ndiyo kernel inokurudzirwa neFree Software Foundation uye chidimbu chikuru che Kugoverwa kweGNU kwakasununguka zvachose nezvimedu zvezvivakwa kana kusanganisira firmware muLinux anoshandiswa kutanga zvishandiso kana kuisa zvigamba kwavari zvinogadzirisa kutadza kwehardware izvo zvaisakwanisa kugadziriswa zvisati zvaitwa kuti zviwanikwe kune vashandisi.
Uyewo, Linux-yakasununguka inoremadza kernel mashandiro kurodha zvisina-emahara zvinhu izvo zvisiri chikamu cheiyo kernel kupihwa uye inobvisa kutaurwa kwekushandiswa kwezvinhu zvisina-zvemahara kubva kumagwaro. Kuchenesa iyo kernel yezvinhu zvisina-zvemahara, yepasirese script script yakasikwa sechikamu cheLinux-yakasununguka purojekiti, iine zviuru zvematemplate ekuona kuvepo kweanopinda mabhinari uye kubvisa enhema positives.
Iyo Linux-yakasununguka kernel inokurudzirwa kuti ishandiswe mukugovera kunosangana neFree Software Foundation nzira yekuvaka zvachose yemahara GNU / Linux migove. Semuenzaniso, iyo Linux-yakasununguka kernel inoshandiswa mukugovera senge Dragora Linux, Trisquel, Dyne: Bolic, gNewSense, Parabola, Musix, uye Kongoni.
1 Nhau huru dzeLinux-yakasununguka 5.14
2 Ini ndinowana sei nekuisa Linux-Libre pane yangu yekugovera?
Nhau huru dzeLinux-yakasununguka 5.14
Mune iyi vhezheni itsva iyo inoburitswa kubva kuLinux-Libre 5.14 inomiririra kusanganisa akati wandei ekuchenesa zvinyorwa izvo zvakagadziridzwa nenzira yakakosha nzira kubvira yekupedzisira -rc pane vanodzora uye masystems uye neiyo blob kurodha yakaremara mune itsva vhezheni mune nyowani eftc uye qcom arm64 madhiraivha, pamusoro peiyo i915 yekutsvaira chikamu zvinonzi zvakagadziriswa nekuda kwefaira rakapihwa zita, nepo vatyairi ve sp8870 nemamwe makadhi av7110 vakasimudza muti uye kuchenesa kwaifanira kugadziriswa. Mazita matsva ebhubhu akawanikwawo mu btrtl, amdgpu uye adreno uye akacheneswa kubva kune kernel kodhi.
Sega, zvinowonekwa izvo pakave nekushandurwa kwekodhi kuchenesa microcode ye x86 masisitimu, pamwe nekubvisa mabhureki akambodonhedzwa muzvinhu kurongedza microcode yehurongwa powerpc 8xx uye mune zvidiki-zvidimbu zve firmware ye svs6624 ensoressezvazvinotaurwa kuti ivo vakanyorerwa seyakarongedzwa manhamba mune yakakwira shanduro dzeLinux.
Sezvo aya mabhubhu aivapo mushanduro dzakapfuura dzeiyo kernel, zvakatemwa kugadzirisa shanduro dzapfuura dzeLinux-yakasununguka 5.13, 5.10, 5.4, 4.19, 4.14, 4.9 uye 4.4, ichinyora sarudzo idzva neteki "-gnu1".
Ehezve, iyo nyowani GNU Linux-yakasununguka kernel yakazara nezvinhu zvimwechetezvo zvitsva nekuvandudza kwatinogona kuwana muLinux kernel, asi inochenesa mazhinji madhiraivha achangowedzerwa kupa 100% yemahara kernel iyo isingasanganisi chero kodhi yekutengesa.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi vhezheni nyowani yeLinux-Libre 5.14, unogona kutarisa izvo Mune inotevera chinongedzo.
Ini ndinowana sei nekuisa Linux-Libre pane yangu yekugovera?
Kune avo vari kufarira kuyedza iyi Linux-Libre Kernel, kurudziro huru kune avo vasinganzwe vakachengeteka kana usina ruzivo rwakakosha kuti uite kusangana, zvirinani Sarudza kushandisa chero ipi zvambotaurwa pamusoro apa izvo zvinoshandisa iyi kernel.
Kana iwe uchida kutora mapakeji ekuita musanganiswa, unogona kuawana nekuenda kunotevera chinongedzo kana iwe unogona zvakare kutarisa inotevera ruzivo rwekugovera nerutsigiro rweAPT.
Zvakare kune avo vanofarira kuyedza kuchenesa kernel yezvinhu zvisina-kusununguka, gwaro reShell rakagadzirwa mukati meLinux-yakasununguka purojekiti, iyo ine zviuru zvematemplate ekuona kuvepo kweanowanikwa mabhinari uye kubvisa manyepo enhema. Yakagadzirira-kushandisa-zvigamba zvakagadzirwa zvichienderana nekushandisa kwescript iri pamusoro zvakare inowanikwa kurodha pasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Linux-yakasununguka 5.14 inosvika iine zvinyorwa zvekuchenesa zvinyorwa
Iyo nyowani vhezheni yeNTFS-3G 2021.8.22 inosvika ichigadzirisa 21 kusagadzikana